Olee ka ndị nledo na WhatsApp na 2021 - methodszọ niile dị adị | Gam akporosis
Olee ka ndị nledo na WhatsApp ma ọ bụ debe otu akaụntụ ahụ na ọdụ abụọ dị iche iche
Ignacio Sala | | Ngwa gam akporo, Nche, Nkuzi, Whatsapp
Iji malite ịgwa gị na na post a ka m ga-akọwa esi ledoo WhatsApp, bụ post gbadoro anya ojiji nke a WhatsApp akaụntụ na abụọ ma ọ bụ karịa ọnụ n'otu oge, ọrụ nke na-anaghị ekwe ka ụmụ amaala WhatsApp gwụla ma anyị chọrọ imepe akaụntụ anyị na desktọọpụ desktọọpụ desktọọpụ site na kọmputa nkeonwe n'agbanyeghị agbanye sistemu arụnyere.
Dabere na enwere ike iji WhatsApp Web ngwa, ndị mmepe nke ngwa a ejirila elele nke WhatsApp Web na-enye anyị iji mejuputa ya ngwa na-aghọ aghụghọ WhatsApp iche na anyị na-eji kọmputa nkeonwe. Nke a ga - enyere anyị aka inwe ike iburu otu akaụntụ WhatSapp ahụ na ọdụ abụọ dị iche iche n'otu oge na - enweghị ịkagbu otu iji gosipụta nke ọzọ dịka anyị ga - eme ruo ugbu a, ma ọ bụ kwa, maka echiche eche echiche na - echeghị echiche ebumnuche gbara ọchịchịrị, nwee ike ịnweta WhatsApp nke enyi nwanyị anyị, ezigbo enyi anyị ma ọ bụ onye ọ bụla anyị chọrọ na omume anyị na-enye anyị ohere, na naanị ọnọdụ nke inwe ike ịnweta njedebe nke onye anyị chọrọ iledo, ọ dịkarịa ala sekọnd iri dị mkpa iji mepee WhatsApp ha, pịa na WhatsApp Web nhọrọ ma nyochaa QR code na Ọ na-egosi na ihuenyo nke ọnụ onye WhatsApp akaụntụ anyị chọrọ anataghị ikike.
Ngwa a na-ekwu maka oge ahụ na ruo mgbe mmadụ zere ya, nke m chere na ọ gaghị ewe ogologo oge !!, Anyị nwere ike ibudata ya na enweghị aghụghọ ma ọ bụ kaadiboodu site na Playlọ Ahịa Google nke onwe ya n'okpuru aha CloneZap maka WhatsApp.
1 Etu ibudata CloneZap
2 Ma gịnị ka ngwa ahụ na-eme n'onwe ya?
3 Ndi Hackingtor na-arụ ọrụ iji ledoo WhatsApp?
4 Nwere ike ledoo WhatsApp na-enweghị wụnye ihe ọ bụla?
5 Enwere ohere inyocha WhatsApp na-enweghị koodu QR?
6 Olee ka ndị nledo na nwa m WhatsApp enweghị ya achọpụta
7 Ọ bụ mpụ ka ndị nledo na WhatsApp?
Etu ibudata CloneZap
CloneZap adịghị na Playlọ Ahịa Google. Agbanyeghị, anyị nwere ike ibudata ya na ụlọ ahịa ngwa gam akporo ndị ọzọ. Aptoide bụ ụlọ ahịa ngwa ahịa Google na-ewu ewu na-ewu ewu na ebe oburu na odi ngwa ahụ CloneZap ibudata.
Ọ bụrụ na ịnweghị Aptoide awụnyere na ama gị, ị ga-ebudata ya tupu oge eruo iji budata CloneZap. Bụ ihe ngwa eze anyị dị ka ndị na Play Store, ọ dị mkpa na ka anyi megharia nhọrọ mmalite nke amaghi ama inwe ike iwunye ngwa mgbe emechara.
Ma gịnị ka ngwa ahụ na-eme n'onwe ya?
Ngwa etinyere maka ya nwee ike ibu otu akaụntụ WhatsApp ahụ na ọtụtụ ọnụ n'otu oge ahụ, na-eji ọrụ WhatsApp Web arụ ọrụ, O nwere ihe eji eme ihe nke ngwa-atụmatụ onye ọrụ na, ọ bụ ezie na ọ dịghị yiri WhatsApp mbụ, na-arụ ọrụ ya n'ụzọ zuru oke ebe ọ bụ na anyị ga-enwe ike ijikwa WhatsApp anyị n'ọtụtụ ọnụ gam akporo n'otu oge, ọbụlagodi ịnata ọkwa na enweghị ịnwe mmekọrịta na imekọrịta WhstaApp na-akọ oge ọ bụla anyị chọrọ ịgbanwe ama.
Ngwa kacha mma n'efu iji mepụta akwụkwọ mmado maka WhatsApp
E wezụga nke a ezi uche arụmọrụ, a arụmọrụ na anyị ga-enwe ike i imitateomi nanị na ihe nchọgharị weebụ na anyị arụnyere na anyị gam akporo site etinye ya na ọnọdụ «Gosi nsụgharị desktọọpụ» na ịbanye na ibe weebụ WhatsApp, CloneZap maka WhatsApp na-enye anyị ohere ịchọgharị na kọntaktị nke scanned WhatsApp akaụntụ, niile chats mere na-ahụ niile multimedia faịlụ zitere Ewezuga olu ma ọ bụ ederede ọdịyo, na ihe a niile dị ka a ga - asị na anyị nọ na ngwa WhatsApp na - egosipụtaghị anyị ọdịiche ọ bụla na ụdị desktọọpụ nke WhatsApp Web.
Otu m si agwa gị na mbido post ahụ ma ekwuola m ya n'oge ole na ole, Ezubere ngwa a maka iji onwe anyị na akaụntụ WhatsApp anyị, ma onye gwara m na agaghị m emeli ya na akaụntụ WhatsApp nke enyi m nwanyị, ezigbo enyi m ma ọ bụ onye m chọrọ.
Naanị azụghachi iji nweta nke a nledo na WhatsApp nke onye anyị chọrọ, bụ na anyị ga-eji aka iji nweta akaụntụ WhatsApp nke onye anyị chọrọ iledo ma ọ bụ chịkwaa, ya bụ, anyị ga-enwe ike ịnweta ngwaọrụ nke onye anyị chọrọ iledo na WhatsApp ha, mepee ngwa WhatsApp , pịa na ntọala WhatsApp wee họrọ ngwa ngwa WhatsApp Web iji nyochaa koodu nke gosipụtara anyị site na ngwa CloneZap For Android nke anyị rụnyere na gam akporo anyị.
Etu esi amata ma ọ bụrụ na mmadụ na-agụ ozi WhatsApp gị yana ihe ị ga-eme banyere ya
Nke a bụkwa-uru karịsịa maka nnyocha na ụmụ gị na mkparịta ụka mgbe ha na-eto eto na-enwe ha mbụ mobile. Maka nke a, ị ga-eme ya budata whatsapp n'efu ma soro usoro ndị a anyị tụlere n’elu. Ọ bụ ụzọ iji chịkwaa ndị enyi ha na ihe ha na-agwa ibe ha, na-ezere nsogbu nwere ike iso ụmụaka ndị ọzọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ ịchọpụta n'ụlọ.
Usoro na-agwụ ike mana ọ bụrụ na anyị nwere ụfọdụ ọrụ, na nlekọta nke onye anyị chọrọ iledo, nlekọta nke ga-esiri anyị ike sekọnd iri, iji nwee ike nweta mmepụta oyiri gị WhatsApp na akaụntụ anyị na gam akporo ma si otú-enwe ike ledoo WhatsApp nke onye ahụ na anyị chọrọ ịchịkwa ma ọ bụ nanị ịghọgbu mkparịta ụka nzuzo ha.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na eledo WhatsApp, si ngwa ntọala gaa WhatsAppWeb na hụ ngwaọrụ ndị ị nwere nnọkọ na-emeghe. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla yiri ka ọ na-enyo gị enyo, ị nwere ike imechi ya na-enweghị nsogbu ka a nyochaa gị.
N'ezie, iji zere nsogbu nzuzo anyị na-akwado mgbe niile melite WhatsApp na ọhụrụ version dị kemgbe ọ bụla melite na-ewebata ndozi na ọtụtụ n'ime ha na-iji ka mma nche nke mkparịta ụka anyị.
Ọ bụrụ na i chere na ị nwere ike ịbụ onye aja nke ngwa a ma ọ bụ ihe yiri ya, lee, anyị na-akọwa kedụ ka esi amata ma ị metụla na WhatsApp.
Ndi Hackingtor na-arụ ọrụ iji ledoo WhatsApp?
Hackingtor bụ websaịtị nke ghọrọ ewu ewu afọ ole na ole gara aga. Onye ọ bụla na-ekwu okwu banyere weebụsaịtị ahụ kwere ohere ọ bụla WhatsApp akaụntụ. Ruo taa, ibe weebụ ahụ ka na-arụ ọrụ, n'eziokwu, ibe weebụ abụọ dị iche iche, nwere ngalaba yiri ya nke na-egosi na anyị nwere ike ịnweta akaụntụ WhasApp ọ bụla.
Naanị anyị ga-abanye nọmba ekwentị nke anyị chọrọ iji nweta data ahụ, họrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta ederede, vidiyo na onyonyo wee pịa anataghị akaụntụ WhatsApp. Mgbe ahụ ogwe ọganihu ga-egosipụta nke na-egosi anyị ọnọdụ nke mbanye anataghị ikike nke a na-ekwu na ọ na-ewere ọnọdụ m na-ekwu na-eche n’ihi na ọ naghị arụ ọrụ, ọ bụghị ezigbo, ọ bụ ojoro.
Ozugbo usoro a gwụchara, ọ na-enye anyị ya njikọ abụọ na akụkọ ihe mere eme na anyị ahọrọla n'akụkọ ahụ. Maka edemede a, ahọpụtara m ka m nweta ma nkata, onyonyo, na vidiyo. N'ụzọ na-akpali mmasị, faịlụ ikpeazụ na data nke akaụntụ ahụ nwere naanị 29 MB, mgbe ọ kwesịrị ịnwe ọtụtụ GB. Nke a bụ nke mbụ na-egosi na ihe na-ezighi ezi.
Site na ịpị na nke ọ bụla n'ime njikọ abụọ ahụ, ọ na-emegharị m gaa na ibe weebụ, ebe m ga-edebanye aha iji nwee ike ịnweta ọdịnaya ihe nkiri ya (ihe ngosi nke abụọ). Ọrụ ahụ bụ n'efu, mana Ekwesịrị m ịnye nkọwa kredit kaadị m, gụnyere CVC nke anyị hụrụ na azụ kaadị (ngosipụta nke atọ).
Ekwesiri icheta na oburu na anyi nye data a nile, tinyere CVC, onye obula nwere ike inweta data ahu, ị nwere ike iji kaadị anyị zụta ihe N’ebe ọ bụla n’ụwa.
Ibe ibe ozo, nke url ya yiri nke gara aga, na-egosi a ọtụtụ ndị ọzọ ọkachamara ọdịdị. Anyị kwesịrị ịbanye nọmba ekwentị anyị (nke mba ọ bụla n'ụwa) ka ihe nkiri ahụ malite.
Mgbe ahụ, dị ka a ga - asị na ọ bụ ihe nkiri hacker, ọ ga - amalite gosi ahịrị koodu, ebe a na-egosi ma nọmba ekwentị anyị banyere, yana IP anyị (nke ha si nweta ọnọdụ anyị iji gosi ya na usoro ndị ahụ) na-anwa igosipụta eziokwu.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị elee anya nke ọma, agbanyeghị na anyị amachaghị ihe gbasara kọmpụta, anyị nwere ike ịhụ etu esi eme ntuziaka ndị a na-eme na mpaghara, n'oge ọ bụla egosiputa adreesị https ebe enwere ike ịchekwa data ahụ nke ị kwesiri ịbanye.
Mgbe usoro ahụ kwụsịrị, nke na-ewe nkeji ole na ole, a na-egosipụta ihe oyiyi elu, nke ọ na-agwa anyị nke ahụ nwere ihe ịga nke ọma hacked nke ọnụ ọgụgụ anyị kwuru, ọnụ ọgụgụ nke mkparịta ụka yana ọnụ ọgụgụ onyonyo, vidiyo na ederede olu nke ọ nwere ohere. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu 1.89 GB. Maka ugbu a, ihe niile dị ka ihe kwere ekwe.
Iji nweta data nke ebe nrụọrụ weebụ a, ihe mbụ anyị ga-eme bụ nyochaa ma anyi abughi robot. Ihe ngosi nke mbu na ihe adighi nma. Ọ dị mma, ọ dị mma, ihe masịrị anyị bụ ịmata oke ọnụọgụ WhatsApp nke anyị kwupụtara ka amaburu ma ọ bụ na ọ bụ aghụghọ ọzọ. Pịa na Kpọghe ugbu a.
Ọzọkwa, dịka ọ dị na weebụsaịtị gara aga, a na-eduzi anyị na ibe weebụ ebe ọ gwara anyị ka anyị debanye aha iji nweta akwụkwọ ntanetị nke ọ na-enye anyị. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịnwale ọrụ ahụ maka ụbọchị 7, ọ dị mkpa na ka anyị tinye nọmba kaadị akwụmụgwọ zuru oke yana CVC, ka ọrụ ahụ wee nwee ike ịlele mba anyị nọ na ya iji nye anyị ohere ịnweta ọdịnaya iwu dị na mba anyị.
Kpamkpam ọ dịghị ibe weebụ, nke ahụ na-ekwu na anyị ga-enweta data nke akaụntụ WhatsApp ndị ọzọ, nwere ike ịme ya, ọbụlagodi ndị niile achọtara na weebụ ebe anyị na-agagharị.
Na mgbakwunye na web anyị na-ahụ (Google, Wikipedia ...), nke anyị na-eji kwa ụbọchị, enwekwara Miri weebụ, data sitere na ibe weebụ nke na-enweghị ike ịnweta mmadụ niile (ọdụ data, njikọ kpọmkwem, nzere nweta) na Ochichi Uzo, ebe anyị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla a na-ewere dị ka iwu na-akwadoghị.
Ọchịchịrị Weebụ dị naanị na ihe nchọgharị pụrụ iche (Thor kachasị eji ya) ma ọ bụrụ na anyị achọta onye nwere ike mbanye na akaụntụ WhatsApp n'ezie (enwere ọtụtụ wayo), ọ gaghị adị ọnụ ala.
Nwere ike ledoo WhatsApp na-enweghị wụnye ihe ọ bụla?
Nanị ụzọ ị ga-esi nwee ike ịnweta akaụntụ WhatsApp nke onye ọzọ na-enweghị wụnye ngwa ọ bụla nke atọ site na ọrụ WhatsApp Web na iji ihe nchọgharị na-enye anyị ohere ịkwanye web.whatsapp.com dị ka a ga - asị na ọ bụ kọmputa.
Ọ bụghị ihe nchọgharị niile na-ejikwa ịghọ aghụghọ WhatsApp weebụ iche na ọ bụ kọmputa, laptọọpụ ma ọ bụ desktọọpụ. Ọ bụrụ na ihe nchọgharị anyị na-anwa iduhie WhatsApp weebụ, a ga-egosipụta akara ngosi, akara ngosi ahụ anyị ga-enyocha ya na ọnụ anyị chọrọ ịnweta.
Enwere ohere inyocha WhatsApp na-enweghị koodu QR?
Ihe QR nke egosiputara na weebụsaịtị whatsapp.com bu ihe puru iche na nke onwe, ya bu, koodu a di ire maka akara ekwentị nke anyi choro iji webusaiti WhatsApp. Koodu ndị a na-enweghi usoro na ozugbo ha jikọtara ya na nọmba ekwentị, a gaghị egosikwa ya ndị ọrụ ndị ọzọ.
Nke a bụ naanị ụzọ iji jikọta nọmba WhatsApp na ọrụ WhatsApp Web. Ọ bụrụ na igwefoto nke ekwentị gị anaghị arụ ọrụ, ị gaghị enwe ike ịnweta ọrụ weebụ a ruo mgbe ị gbanwere ọnụ. Za ajụjụ a dị na ngalaba a: Enwere ohere inyocha WhatsApp na-enweghị koodu QR?. Azịza ya bụ Mba, ọ gaghị ekwe omume, na onye ọ bụla kwuru na ha nwere ike ime ya na-agha ụgha.
Olee ka ndị nledo na nwa m WhatsApp enweghị ya achọpụta
Dịka m kwurula na ngalaba ndị gara aga, naanị otu ụzọ iji nweta akaụntụ WhatsApp bụ site na WhatsApp Web. Enweghị ụzọ ọzọ iji nweta. Enweghị ngwa ọ bụla na-enye anyị ohere ime ya taa (na nsụgharị ochie nke gam akporo ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume).
Nanị usoro iji nweta mkparịta ụka nwa gị WhatsApp nwere iji WhatsApp Web, site na kọmputa ma ọ bụ site na ekwentị gị site na iji ihe nchọgharị nke na-enye gị ohere ibudata weebụsaịtị WhatsApp ebe ebe QR gosipụtara na desktọọpụ.
N'ezie, usoro a ga-arụ ọrụ ruo mgbe nwa anyị nwoke ga-elele ya niile Oge WhatsApp ị nwere ike imeghe na kọmputa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị mechie nnọkọ niile ị na-amaghị, anyị ga-akwụsị ịnweta mkparịta ụka WhatsApp niile nke nwa anyị.
Ọ bụ mpụ ka ndị nledo na WhatsApp?
Nnyocha na mkparịta ụka WhatsApp nke onye ọzọ, n'agbanyeghị ọkwa nke kinship, dịka edemede nke 197 nke Spanish Penal Code, bụ mmebi nke nzuzo, yabụ tupu iledo na WhatsApp akaụntụ nke ọ bụla n'ime ndị ị maara, ị kwesịrị ị na-eche ugboro abụọ, ebe ọ bụ na ị nwere ike iweta ahịrịokwu nga.
Ọ bụrụ gbasara ụmụ anyị, ihe na-agbanwe, ebe ọ bụ, dabere na afọ nke nwatakịrị, nghọta nwere ezi uche nwere ike iru site na abụọ ahụ, ọ bụrụhaala na ha abụọ dị njikere inye ogwe aka ha ịgbagọ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, anyị ga-eburu n'uche na ụmụaka na-echekwa ikike nke nzuzo nke edemede 18 nke Iwu Spen. Agbanyeghị, ikike ikpe ziri ezi na-ezipụ nledo kọmputa (ịkpọ ya n'ụzọ doro anya) nye ụmụ anyị iji na-echebe ha ma na-echekwa mmekọrịta chiri anya na nzuzo ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Olee ka ndị nledo na WhatsApp ma ọ bụ debe otu akaụntụ ahụ na ọdụ abụọ dị iche iche
merela agadi dijo
Ọ ga-amasị m ichetara gị na dịka isiokwu 18.3 nke Iwu si kwuo, "Ihe nzuzo nke nkwukọrịta na, ọkachasị, nzipu ozi, ozi telefon na ekwentị nwere nkwa, ewezuga na mkpebi ụlọ ikpe.", Ya mere ịnweta ọdịnaya nke onye ọzọ WhatsApp ya mebiri ikike ahụ ma nwee mmetụta mpụ, yabụ ọ bụ ihe dị oke njọ nke na ekwesighi ịkpọsa ya dịka enwerela ya n'isiokwu a.
Ndewo ebe ahụ. Ọ bụ isiokwu bara ezigbo uru. Ewezuga otu ihe m na-aghọtaghị. Agụrụ m ya, agụghachi m ya ọzọ enweghị m ike iche n’echiche na onye dere edemede a kwuru na anyị nwere ike ledoo onye ọ bụla anyị chọrọ.
Ole, daalụ maka ịgba ụgwọ nzuzo ndị mmadụ. Could nwere ike ịgakwuru isiokwu ahụ dị ka nkatọ, nke bụ ihe m chere na anyị niile ndị na-agụ blog a na-eche.
Teknụzụ na gam akporo na-amasị anyị. Ma, ọ bụghị iwu na-akwadoghị na na ha na-akwalite.
Ọ dị nnọọ njọ.
Onye bụ onye nhazi nke blog a? Ma ọ bụ onye isi nchịkọta akụkọ? Adighi-ekwu okwu?
NNE M !!!!!
Mụ onwe m bụ onye nhazi nke Androidsis na anaghị m ahụ asịrị ịchọrọ ịnye na post a, bụ nke a kọwara ma gosipụta na ọ bụ maka ojiji nkeonwe naanị na n'agbanyeghị na ị nwere ike iledo, nke m na-ekwu ekwesịghị -eme ebe ọ bụ na omume na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya dị ka iwu na-akwadoghị, nke a dị ka omume nke ọ bụla.
Ekele na ekele maka okwu gị.
Obi tọrọ m ụtọ, amaghị m na ị bụ onye nhazi. Ugbu a ka m ghọtara ọtụtụ ihe.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ị gaghị ahụ ọtụtụ nsogbu ma ọ bụrụ na ọ bụghị, m ghọtara na ị gaghị ebipụta ya. Hide zoo n'azụ omume ndị mmadụ mana kọwaa nke ọma etu esi eme ya. Nke ahụ dị ka ịsị "Mụta mpụ zuru oke" wee kwue na ọ dị n'okpuru ụkpụrụ omume gị.
Ikwesighi itinye ihe dika ileghara anya na ozi nke enyi gi nwanyi ma obu enyi gi nke na-enweghi ha choputara, nihi na obu mpu, oge.
Amaghi m ihe i bu n'uche site na ojiji nke onwe. Ì chere na onyeisi ụlọ ọrụ nwere ike iji ya na ndị ọrụ ya?
Ma site n'ụzọ, n'isiokwu ị na-ezo aka na omume, ọ bụghị Iwu.
Kedu ihe ị na-ekwu maka «ihe kachasị agwụ ike bụ na ị ga - enweta aka gị, ọ bụ ezie na ọ gaghị ewe gị karịa 10 sekọnd ...»
Na na ị na-ahụ na ọ nweghị nsogbu …….
M na-ekwughachi onwe m ma kọwaa, a haziri ngwa a maka iji onwe gị nke na-apụtaghị karịa ịnwe ike iburu WhatsApp gị na mobiles abụọ n'otu oge na-enweghị iji gosipụta ọwa mmiri ma rụọ ọrụ ma gbanyụọ akaụntụ na onye ọzọ oge ọ bụla ị gbanwere mobile. Ihe m na-akọwa na vidiyo bụ na ọ bụrụ na enyi gị nwoke ma ọ bụ enyi nwanyị ma ọ bụ ezigbo enyi gị ahapụ ekwentị ha na tebụl ma nwee ike iji ya mee ihe iji kpochapụ WhatsApp ha, nke m na-akwadoghị na nke m agaghị eme mee, otu ihe a ga-eme ka ị mee ngwa a na sekọnd iri.
Anaghị m akwado ma ọ bụ megide ngwa ahụ, naanị m na-akọwa ohere ọ na-enye anyị ma ibu ọrụ dị adị na akaụntụ nke onye ọ bụla na omume nke aka ha.
Enwekwara ngwa agha nke na-ere ụdị ngwa agha niile yana yabụ na ị gaghị arara onwe gị nye igbu ndị mmadụ ebe ahụ, ma ọ bụ na usoro TV na ihe nkiri ha na-akụziri gị kwa ụbọchị ime mpụ zuru oke na nke ahụ apụtaghị na ha na-akpali anyị. ime mpụ ọ bụla. M na-ekwughachi nke ahụ dịka ụkpụrụ na omume ọma nke onye ọ bụla.
Mụ onwe m anaghị akwado ụdị ozi nzuzo ọ bụla ma ọ bụ ikpughe nzuzo nke ndị mmadụ ma ana m emegide iji ngwa ahụ maka ebumnuche ndị a.
Eya, m na echetara gị ihe niile na iwu nyekwara nne ma ọ bụ nna ohere inyocha nkwukọrịta nke obere ụmụaka ha. Enwere ikpe nke Onye Kasị Elu nke na-akwado ya.
Naanị ndị gbagọrọ agbagọ na-emerụ ahụ site na edemede nke na-akọwa otu esi eme otu ihe yana onye ọ bụla na-ebu ọrụ maka iji ya. Goodnessdị mma ahụ kpọgidere m na ụfọdụ ndị na-eche na ịgbachi ịntanetị ga-akwụsị mpụ na ụwa.
Ọ dị ka ịkatọ ma ọ bụ ọbụna na-agba ume ka a kwụsị Facebook n'ihi na ọtụtụ ndị na-egbu ọchụ na ndị na-eyi ọha egwu na-eji ya iji kwurịta ma kpọọ ndị na-egbu onwe ha.
Anyị efuo ebe ugwu na anyị na-achụrụ onwe anyị.
Enwere m obi ekele maka isiokwu ahụ ma ejiri m n'aka na m nwere ike igbochi ụmụ m ịdaba na ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ka njọ. N'ezie m ga-agwa gị na m ga-ahụ ihe niile ị na-eme na WhatsApp, n'ihi na iwu na-echebe m.
Zaghachi na UnPadre
ndewo ogologo oge ole ka ị ga-enwe na ngwa ahụ, ya bụ, cloned wathsaap nke onye nke ọzọ? enwere oke oge? ma ọ bụ na anyị kwesịrị ịnọgide na-emelite?
Zaghachi ka daiana
osisi apụl dijo
N'ehihie, ngwa ahụ dị maka iPhones.
Zaghachi ka meli
Ahụghị m ihe kpatara mkparị a. Anyị bụ ndị okenye na onye ọ bụla maara ma ha eme ya ma ọ bụ na ha emeghị ya.
Ozokwa, ha nile dabere n’otú e si lee okwu a anya. Ọ bara ezigbo uru, ebe ọ bụ na ekele maka ozi a, enwere ike ịmatakwu ụzọ ndị netwọkụ mmekọrịta anyị ma ọ bụ nke ndị ikwu anyị ga-esi mechie ma were nlezianya kwesịrị ekwesị !!!!
Na-ejikwa nnwere onwe ikwu okwu gị edebere na Iwu !!!!
Zaghachi Jose Antonio Juarez Cruz
Daalụ FRANCISCO !!!
Ndewo, abum onye Guatemala mana achoro m ibudata ya mana o dighi egosi na o bu ya kpatara o gha adi ma obu enwere ngwa ozo gi mara, daalụ, a ga m echere azịza gị, daalụ
Ndewo m gbalịrị ibudata ngwa clonezap na ụlọ ahịa egwu mana ihe nlele anaghịzi ekwu na anaghị edebanye aha ebe m nwere ike ibudata ya. Gracoas
Zaghachi Tania ramos
Enweghị m ike ibudata ???
Zaghachi Paola Cincunegui
Ka anyi jaa ndi nwem, obu otu ihe ma oburu na mmadu jiri ngwa a na "uzo" (omume); karịa ịbanye n'ụgbọala na-achọ onye ga-agafe n'okporo ámá ... ihe niile dị n'aka gị, otu ị si eji ya na / ma ọ bụ ihe nzube ahụ ga-abụ maka ịchọrọ ịchụ ya.
ngwa apughi ibudata odiyo? Ma oburu na m choro ibudata odiyo nke nkata a, olee otu esi eme ya ??????
N'uche m, WhatsApp n'onwe ya abụghị ngwa a pụrụ ịdabere na ya. Ya mere, ozugbo m malitere iji ya maka ọrụ, m wụnye mSpy ozugbo iji jide n'aka na nchekwa nke data m na ịnweta akaụntụ m na ngwaọrụ ọ bụla.
Clonezap anaghịzi adị ma ọ bụ gbanwee aha?
Zaghachi na theanikilares
Ndewo, enwere ngwa Clonezap, ị nwere ya na listi gam akporo.
Liria onye na -agba ọsọ dijo
Ndewo Francisco, ị bụ?
Zaghachi Liria onye na -agba ọsọ
Offroad motocross na enduro racing na Dirt Bike Unchained
Ozi kacha mkpa banyere gam akporo 3 Onye Mmepụta Preview 11